Somaliland: Wasiirka Caafimaadka Oo U Kuurgalay Heerka Xanuunka Shuban-Biyoodka Ee Boorama - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Caafimaadka Oo U Kuurgalay Heerka Xanuunka Shuban-Biyoodka Ee Boorama
Wasiirka Caafimaadka JSL Mudane Saleebaan Ciise Axmed (Xaglo-toosiye), ayaa u kuurgalay xaaladda dhabta ah ee heerka xanuunka Shuban biyoodka ee ka dillaacay Magaalada Boorama.
Wasiirka oo ka hadlaya ujeedada socdaalkiisan iyo xaaladda uu kusoo arkay goobaha uu booqday oo ay ku jiraan dad uu halleelay xanuunka shuban biyoodku ayaa waxa uu yidhi “Waxaanu ku gudo jirnaa kormeer aanu ugu kuurgalayno xaaladda caafimaad ee gobolka Awdal, waxaanan booqday Cusbitaalka weyn iyo Jeelka magaalada Boorama, labadaba xaaladoodu way wacan tahay”.
Wasiirku waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaaladda dadka uu halleelay xanuunka shuban biyoodka “Cusbitaalka Boorama waxa yaalla dad ilaa dhawr iyo soddon qof ah oo lagu daweynayo, waxaana ku jira shan Maxbuus oo jeelka laga keenay, xaaladooduna way fiican tahay”. Wasiirku waxa uu intaasi ku daray “Jeelka waanu marnay oo Maxaabiista ku jirtaa xaaladda Shuban biyoodka aad ayey uga ladan yihiin”.
Ugu dambayntii, Wasiirka Caafimaadku waxa uu sheegay inuu hawsha kormeerkaasi uu socon doono, islamarkaana uu burrito soo saari doono xog rasmi ah oo ku aadan xaaladda cudurka Shuban biyoodka ee gobolka Awdal. Ayuu yidhi Wasiirka Caafimaadka JSL Dr Saleebaan Ciise Axmed (Xaglo-toosiye)